भुसाल भन्छन्, ‘दैनिक सय तस्करी र दलालसँग भेट हुन थाल्यो’ | Sarathi News
May 6, 2019 | 6:42 am
काठमाडौं, बैशााख २३– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले नेताहरुको दिनमा सय जना दलाल र तस्करीसँग भेट हुने गरेको बताएका छन्। आइतबार कार्ल माक्र्सको २०१ जन्मस्मृतिमा बोल्दै भुसालले विहान तस्करी, दिउँसो दलाल र साँझ आफ्नै पार्टीका नपढाउने प्रोफेसरसँग भेट हुने गरेको बताएका हुन्। उनले भने ‘आँखा मात्रै झिम्काउनुस् त्यहा सबथोक हुन्छ।’
तस्करी, भूमाफिया र भन्सारका मान्छेहरुसँग नेताहरुको उठबस हुने गरेको उनले बताए। उनले भने ‘अलि ठूलो घर भए मात्रै नेताहरु अहिले खुब क्रान्तिकारी ठान्छन्।’ भुसालका अनुसार व्यापारी र तस्करी कसको भन्ने बिषयमा पार्टीभित्रै सैदान्तिक बहस हुने गरेको छ। अहिले कानुनबाट बच्न न्यायाधीस आफ्नै राख्ने गरिएको छ। ‘अदालत र अख्तियारलाई काँध थाप्न नेता, मिडिया र सुरक्षा निकायको गठबन्धनको साक्षि म आफैं हुँ’ भुसालले भने।
पार्टीका नेताहरुले के–के गर्छन् त्यो जानकारी हुनुपर्ने बताउँदै सत्य निरुपण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ‘नेताको जीवन कसरी चल्छ? कुन नेताले के गर्छन्? त्यो पार्टीभित्र बहस र छलफल चलाउन जरुरी छ’ भुसालले भने ‘अनि मेलमिलाप पनि जरुरी छ।’ संगठनलाई भेडीगोठ र आफुलाई गोठालो ठानेको बताउँदै उनले भने ‘अब त छाति पिटेर रुने अवस्था आइसक्यो। नेता र कार्यकर्ताले पार्टीभन्दा माथि आफूठान्दा पार्टी नै ओरालो लाग्ने बताए।
त्यस्तै सरकारप्रति व्यंग्य गर्दै उनले भने ‘दलाल र पूजिँवादविरुद्ध हामी कहिलयै बोल्दैनौं तर सुखी नेपाल र सम्वृद्धि नेपालको नारा घन्काउँछौं।’ भ्रष्टाचार गर्दिन मात्रै भन्छौं तर भ्रष्टाचार हुने प्वाठ टाल्न नसक्दा वासुकी नागको फोटो टाँसेर आफु चोखो हुन खोजे जस्तै हो।’ हिजो राजा र कांग्रेसले खाए आज कम्युस्टिले भन्न थालिसकेका छन्। हुन त मलाई रेल र पानी जहाजको बिरोधी भन्छन् तर म होइन्। एउटा कुरा के बुझौं भने अफ्रिकाको डान्सबारमा नांगो नरोकिएसम्म समाजवाद आउँदैन्।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।